China Dangling Lapel Izikhonkwane ifektri nabakhiqizi | Kingtai
Izikhonkwane ze-lapel zoqweqwe oluqinile: ezibizwa nangokuthi i-cloisonne, ingeyendabuko kakhulu inokucwebezela okuphezulu nokuqina kokulingisa izikhonkwane ze-lapel zoqweqwe oluqinile: enye yezikhonkwane ezidume kakhulu, ebizwa nangokuthi i-EPOLA enezintambo ezincane zensimbi ingahlukanisa izikhonkwane zombala ngamunye oqoshiwe. izikhonkwane ze-lapel ezithambile zoqweqwe lwazo: isitayela esithandwa kakhulu, eziningi zezinzuzo ezifanayo ze-cloisonne surface texture, inani liphezulu kakhulu.
Izikhonkwane ze-offset ne-screen lapel: Inqubo eshesha kakhulu yokwenza amalogo ngokwezifiso noma izikhonkwane ezinokubukeka okufanayo.Iphinikhodi ye-etch lapel yesithombe: ukukhetha okungcono kakhulu komklamo wosayizi omkhulu noma i-flash Mosaic.
Iyatholakala kwezinye izikhonkwane ezifana nokushelela, ukuphotha, ukulenga, ukubhoboza, ukucwayiza noma izikhonkwane ze-lapel ezihambayo
Izikhonkwane zekhola yenkanyezi zilungele ukukhetha okubalulekile, umbala nosayizi okudingayo. Siyaqiniseka ukuthi uzokwaneliseka futhi ugqoke ibheji lakho elilengayo eliyingqayizivele!
Izici eziyinhloko zeshadi lokunamathisela lensiza ukuthi unga-oda kanjani ukuthi kungani ukhetha i-Lapel Pin yethu elengayo
Sithumelele umklamo wakho kanye nelogo yenkampani, le phrojekthi yilokho okufanele uzame!
Izikhonkwane ze-Dangle Lapel zangokwezifiso ezinomsebenzi wakho wobuciko wokuklama. Nikeza izinketho ezigcwele zokukhiqiza ezitholakalayo. Kungakhathaliseki ukuthi udinga i-enamel eqinile noma i-enamel ethambile, i-offset printing digtal printing, isitembu nanoma yini enye sikwenza konke. Noma yini ingenzeka. Izintengo eziqondile zasembonini zangempela.
Okwedlule: Iphinikhodi ye-3D Lapel
Olandelayo: Die casting lapel pin
Iphinikhodi ye-Lapel elengayo